Dhageyso: Wariye Booqday Deegaanka Bariire Kadib Markii Ay isaga Baxeen Ciidamada Bangaraafta Dowladda Federaalka.
Saturday October 14, 2017 - 20:55:53 in Wararka by Super Admin
Xaalad degnanaan ah ayaa laga dareemayaa deegaanka Bariire ee gobolka Sh/Hoose kadib markii ay dib ula wareegeen ciidamada Al Shabaab.
Boqolaal qof ayaa maanta gelinkii dambe isugusoo baxay waddooyinka deegaanka waxayna muujinayeen farxaddooda ku aaddan Nabad gelyada dib ugusoo laabatay deegaankooda.
Saldhigyadii ay faarujiyeen maleeshiyaadkii Bangaraafta ee dowladda Mareykanka tababartay ayaa lagu arkay agabyo kala duwan sida Konteenarro ay ka buuxaan darees ciidan iyo saanado kala duwan oo dowlado shisheeye ugu deeqeen dowladda Federaalka.
Wariye Cabdi Kariim Seyfullaah oo booqday deegaanka Bariire saacado kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Bangaraafta ayaa soo sheegay in Meydadka 2 askari laga helay beeraha ku hareeraysan deegaanka, Meydadka lahelay ayaa ku dhintay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee Bariire ka dhacay 29 September2017.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in tobaneeyo qoys oo horay uga barakacay deegaanka ay maanta gelinkii dambe si halhaleel ah guryahooda dib ugusoo laabteen, ciidamada Al Shabaab ee deegaanka dib ula wareegay ayaa shacabka ugu baaqay in ay is dajiyaan dhowaana dib loo howlgelin doono maamulkii islaamiga ahaa ee horay magaalada uga jiray.
Halkan ka dhageyso Wariye kasoo warramay Bariire MP3